Notre-Dame de Paris: burburinta waqtigan qaali ah - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Notre-Dame de Paris: Waxyeellada waqtigan aadka u qiimo badan
Dhaqanka, saqafka iyo dhoobada cathedral waa la burburiyey. Hadda waa lagama-maarmaan in la qiimeeyo xaaladda qaab-dhismeedka. Dabka ayaa yimid Isniintii iyada oo dayactir wayn la sameeyay.
Waxaa qoray Jean-Jacques Larrochelle Ku qor maanta 05h02, cusbooneysiiyay 11h04
Waqtiga Akhrinta 5 min.
Isku xidhka calaamada Notre-Dame de Paris, dab, dhowr daqiiqo ka hor intaanay burburin, 15 April. BARNAAMIJKA BIXIYAHA / REUTERS
Waxaa si qurux badan loo naaneeso "kaynta". Alwaaxda geedkii weyn ee Our Lady of 110-meter Notre Dame, mitir 13 10 ballaaran oo mitir sare, dhameeyey hore XIII ahe qarnigii 8aad, iyo qaar ka mid ah kuwaas oo taariikhdoodu ahayd qarnigii 8aade qarnigii 19aad, gebi ahaanba waa ay ka baxeen qiiqa, iyo sidoo kale dhammaanba saqafka weyn ee saqafka. Fagaaraha, sida calaamad, ayaa burburay wax yar ka hor saacadaha 20 hoosta qaniinyada dabka ay ku kaceen dabayl xoog leh. Meelaha mitirka 93 sareeyo, lama fududeyn karin dabka dab-demiska.
Long hanjabay, belfry woqooyi dhawro square ah, kuwaas oo ay ku dhacaan ayaa loogu tala galay in munaaraddii ay mataanaha, koonfurta, iyo burburinta karin of badan oo ka kacay suuqa kala, baxsadeen ugu xumaa, mahad go'an tahay, u dhaw ah askari oo dab PSG. Si kastaba ha ahaatee, waxaan weli ma garanayo sida hay'adda ugu weyn ee cathedral ee ugu khasaaray.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Dab-demiska Notre-Dame de Paris: baaritaanku wuxuu u muuqdaa mid adag
Noocan oo kale ah, waqtigaan, waa qoraalka murugada leh ee dabkani. Waqtigan xaadirka ah. Sababtoo ah waxay ahayd dabcan wali hore, subixii Talaadada, si buuxda u cabbiraan inta ay le'eg tahay dhaawaca. qalabka Dhagaxii, xoojinay mid xoojiyo steel "welded" si uu u hoggaamiyo, dhab ahaan soo gaartay xoogga dabka meesha heerkulka kici lahaa in ka badan 800 degrees. In aan ku xuso ay waxyeello ka soo gaartey xaddi badan, laakiin loo baahan yahay oo biyo ah in xaqiro karo gasho khasnadihii badan oo ku jira derbiyada cathedral gudahood.
Si loo qiyaaso saameynta ka dhex-galka dab-demiska
Si ka duwan dhisme adag tahay "caadi ah" marwalbo dabka ahayd in circumscribe holaca, oo ay la socdaan keeneysa in saamaynta ay faragelinta si aan loo wiiqi dhaxal ahaan ugu gaar ah oo tayo leh site.
Tuugta dhagax ayaa la wiiqay, maadaama dab-demisku soo sheegay, laakiin waa la qabtay. Hawlgalkeeda asalka ah waa mid si cad looga hortago faafidda dabka. "Inkastoo dabku uu sii kordhay, kaalintiisa ayaa ah in la eego inta u dhexeysa qaabka iyo mugga nuts ka hooseeya"wuxuu hoosta ka xariiqayaa naqshadda dhismaha ee François Châtillon ee taariikhiga taariikhiga ah. Dhamaan qarniyadii dhexe, dhismayaasha oo dhan oo qoryo ah, masiibo ka dhalatay baaxadiisu waxay si buuxda u gubi lahayd degmada.
Iyadoo ay jirto cabir aan horey loo arag, "Dhismaha Notre-Dame de Paris waa la badbaadiyey lana xafidaa dhammaantiis"faahfaahin, fiidkii, dab-demiyeyaasha. Subaxnimadii Talaadada, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Laurent Nunez, wuxuu ahaa wax yar oo rajo xumo ah, isaga oo sharxaya in ay jirto "Waxay ka shakiyaan sida qaab-dhismeedku u dabooli lahaa".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/16/notre-dame-la-restauration-de-la-fleche-et-de-la-toiture-premiere-phase-de-150-millions-de-travaux_5450701_3224.html
Youtube: Haweenka kubadda cagta ee haweenka Barcelona iyo Real Madrid ee 2019
Chris Evans ayaa hoos u dhacay waxaana uu shaaca ka qaaday 'Rakaabka: Endgame' - BGR
Waa kuwan sababaha 5 sababta dadka khabiirku aad ugu faraxsanaan karaan
Galaxy Fold: Yaa jabiyay casriga cas ee Samsung?